Raw Oxymetholone (Anadrol) Soo-saareyaasha budada & Alaab -eeyayaasha - Warshadda
Kalluunka Oxymetholone (Anadrol) budada (434-07-1)
Oxymetholone (Anadrol) budo waa steroid afka ah oo ka tirsan kooxda daawooyinka loo yaqaano anabolic steroids waana dhab ahaan magaca magaca Oxymetholone. Isticmaalka stobbing anabolic waxay sii wadaan inay sameeyaan cinwaannada isboortiga iyada oo jidh-dhisayaasha iyo cayaartoyda u isticmaalaan inay joogaan qaabka ugu sarreeya. Isticmaalayaasha intooda badan waxay qaataan waxqabadkoodu kor u kici karo iyo xoojinta steroids ee rajada ah in ay kor u qaadi doonaan awooddooda ay u qaadaan culeyska culus.
Qalabka Oxymetholone (Anadrol) budada (434-07-1) video
Nooca Oxymetholone (Anadrol) budada (434-07-1)
Kiimikada Oximetholone waa macmacaan anabolic antholic synthetic and derivative 17alpha-methylated dihydrotestosterone, oo leh dhaqdhaqaaqa iyo quudinta. Inkasta oo oxymetholone uu leeyahay hoos u dhigid hoose oo loogu talagalay qabsashada xajiyaha iyo xajinta (AR), waxay si firfircoon uga dhigaysaa calaamad muujinaysa AR-dhexdhexaadin, taas oo kicinaysa labadaba borotiinka wax soo saarka iyo soosaarista erythropoietin. Wakiilkan ayaa kicin kara kobaca murqaha, wuxuuna dhaliyaa soo saarida hemoglobin iyo sameynta unugyada dhiigga cas, iyo kor u qaadka cufka kordhiya.
Qalabka budada ah ee loo yaqaan 'Anadrol powder' oo lagu tilmaamay daaweynta anemias sababay wax soo saarka unugyada cas ee yar. Dhiig karka udabdhaca, dhiig-yaraanta dhiig-yaraanta, myelofibroxis iyo dawooyinka hypoplastic-ka ah sababtoo ah maamulka dawooyinka maan-dooriyeyaasha ayaa badiyaa ka jawaaba. Oxymetholone waa inaysan beddelin tallaabooyin kale oo taageero ah sida isdhaafsiga, saxitaanka birta, folic acid, fitamiin B12 ama yaraanta pyridoxine, daaweynta bakteeriyada iyo isticmaalka habboon ee corticosteroids.
Kalluunka Oxymetholone (Anadrol) budada (434-07-1) Smamnuucista
Product Name Kalluunka Oxymetholone (Anadrol) budada
Magaca Kiimikada Anadrol, CI-406; NSC-26198
Fasalka Daroogada Androgen, steroid anabolic
Molecular Wsideed 332.48
Monoisotopic Mass 332.48 g / mol
barafku Psaliid 172-180 ° C
Fdib u soo celinta Psaliid 341.6 - 356 ° F
Biological Life-Life Saacadaha 8 - 9
Color White budo jaalaha
SOlubility <0.1 g / 100 mL at 23 ºC
Application Cudurka anabolic anabolic, oo ah nooc ka samaysan hormoon la mid ah testosterone waxaana loo isticmaalaa in lagu daaweeyo noocyada qaar ee dhiig-yaraanta (la'aanta unugyada dhiigga cas), oo ay ku jiraan dhiig yari oo sababay kiimiko.
Waa maxay budada Oximetholone (Anadrol) budada (434-07-1)?
Oxymetholone, oo lagu iibiyey magaca caanka ah ee Anadrol iyo Anapolon iyo kuwa kale, waa daawada asaasiga ah iyo anabolic steroid (AAS) oo loo isticmaalo daaweynta dhiig-yaraanta. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daweeyo lafo-xannuun, cudurka HIV / AIDS-ka, iyo kor u qaadista miisaanka iyo koritaanka muruqyada xaaladaha qaarkood.
Sidee budada Oximetholone (Anadrol) budada ah (434-07-1) shuqullada
Mid ka mid ah waxyaabihii u dejiyey Anadrol marka laga reebo faro badan oo kale ee anabolic androgenic steroids waa awooda lagu kobcin karo wax soo saarka dhiigga cas. Daroogadani waxay u shaqaysaa kordhinta qadarka hormoonka erythropoietin, kaas oo ku lug leh soo saarida unugyada dhiigga cas. Waxay u gudubtaa unugyada kilyaha waxayna kicisaa wax soo saarka hoormoonka, oo lagu sii daayo dhiigga. Hormoonka ayaa wareega jidhka ku wareega wuxuuna u dhaqaa unugyada lafta lafta si uu u soo saaro unugyada dhiigga cas. Tani waa waxa ka dhiga waxtarka daaweynta dhiig-yaraan.
Awoodda Nuclearka si kor loogu qaado wax soo saarka unugyada dhiigga ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya xoojinta waxqabadka ciyaaraha. Marka tirada unugyada dhiigga cas ee la kordhiyo laguna wareego jidhka, qadar badan oo oksijiin ah ayaa loo wareejiyaa murqaha. Tani waxay dhalinaysaa tamar badan inta lagu jiro howsha, taasoo kuu sahli karta inaad ku fiicnaato jimicsiga.
Kalluunka Oxymetholone (Anadrol) budada (434-07-1) Qiyaasta
Anadrol waxaa loo maamuli karaa labo siyaabood: afka iyo irbad. Kiniinnada afka Oxymetholone waxaa lagu soo saaraa dhalooyin ay ku jiraan kiniinada sonkorta leh ee 100. Markaad qaadato afka Orthodo, qiyaasta daawada Oxymetholone ee loogu talagalay cayaaraha raggu waa 1-5mg halkii kilo ee miisaanka jirka. Qiyaasta ugu badan ee caanaha (Oxymetholone) waa xmUMX mg maalintii. Haddii jidhkaaga uu u dulqaadan karo, ma jirto wax kordhin kara qiyaastaada Oxymetholone oo si tartiib tartiib ah u ah maadada 50 maalintii.
Aad bay u yartahay in qof kasta oo isticmaala uu u baahan yahay inuu isticmaalo wax ka badan XMUMX mg mg of Anatrol maalintiiba. Dhab ahaantii, qaadashada wax ka badan XMUMX mg maalintii ma aha mid lagama maarmaan. Qaadashada qiyaas ka sareeya Oxymetholone waxay keeni kartaa saameyno dheeraad ah ee Oxymetholone iyadoon lagama maarmaanka u aheyn kordhinta natiijooyinkaaga macaashka.
Root Oxymetholone (Anadrol) budada (434-07-1) Dheefaha
(1) Natiijooyin kedis ah
Anadrol waxaa loo yaqaanaa inuu yahay mid aad u awood badan oo dhaqdhaqaaq leh. Isticmaalayaal badan ayaa ka warramay in ay heleen nambarada 10-30 gudaha afartooda illaa shan asbuuc ee qaadashada daawada. Taas macnaheedu waa in aad ka soo bixi kartid maqaarka ama celceliska ilaa aad u weyn marka la eego bilaha 2.
(2) Waxay kor u qaadeysaa faa'iidada halista ah
Markaad isticmaasho Anadrol, waxaad u maleyneysaa inaad ku guuleysatid guulo aad u ballaaran mudada gaaban. Qeyb ka mid ah Oxymetholone wareega inta u dhexeysa afar illaa lix usbuuc, waxaad ka heli kartaa meel kasta oo ka timaada 20 ilaa 30.
Muruqa wuxuu udub dhexaad u yahay steroid anabolic anabolic waxaa lagu aqoonsan yahay ehelka caafimaadka, taas oo ah sababta daroogada sida caadiga ah loo qoro daaweynta muruqyada neefta, iyo sidoo kale daaweynta sifeynta qadiimiga ah ee dheeriga ah. Marka loo isticmaalo in lagu daaweeyo xaaladdahan, steroid waxay ka caawisaa bukaanada inay yeeshaan qulqulo cufan.
(3) Waxay xoojisaa awoodda
Markaad si joogta ah u qaadato qiyaasta Oxymetholone saxda ah, waxaad hubaal ka dhigeysaa inaad xoogaa xoog ah gudaheed waqti gaaban. Qaar ka mid ah awood-bixiyeyaashu waxay sheegeen inay kor u qaadeen ilaa 40lbs oo ku yaalla dhismaha wax ka yar soddon maalmood. Waxaa jira tiro daraasado ah oo baaritaan ku sameeyey saamaynta Nucleurriga xoogga iyo in ay ka heleen steroid si aad ah waxtar u leh kor u qaadista awoodda. Inta badan awood-bixiyeyaashu waxay ku tiirsan yihiin steroid si ay kor ugu qaadaan xooggooda marka tartamadu ay u dhow yihiin.
(4) Waxay xoojisaa dulqaadka
Haddii aad badanaa dareento daal badan ka dib markaad shaqeyneyso dhowr daqiiqo, qaadashada steroidkan waa waxa aad u baahan tahay si kor loogu qaado waxqabadkaaga. Iyada oo ay sabab u tahay saameynta Anadrol ee soo saarista unugyada dhiigga cas, qaadashada steroid this waxay kaa caawin kartaa inaad hagaajisid adkeysiga muruqa. Tani waxay ka dhigan tahay inaad adigu awoodi kartid in aad qabato hawlo culus oo culus oo muddo dheer ah oo aan la xirin.
(5) Waxay sahlaysaa fatahaada
Hagaajinta waxqabadka, korodhka xoogga leh iyo adkaysiga adkaysiga ee jimicsiga, luminta luminta wuxuu noqonayaa mid sahlan sida 123. Sidaa darteed, qaadashada Anadrol waxay kaa caawineysaa inaad daadiso dufanka aan la rabin oo aad awood u yeelatid in aad dhisatid murqo.
(6) Waxay kaa caawineysaa inaad dhakhso u bogsato
Mid ka mid ah cabashooyinka caamka ah ee cayaaraha iyo jirdhisleyda badani waxay leeyihiin in jidhkoodu caadi ahaan u baahan yahay inuu ku qaato dhowr maalmood oo dib u soo kabasho ka dib markii uu jirku xoogaa culus. Nasiib darro, jirdhislayda badanaa ma haystaan ​​raaxada wakhtiga raaxada ah ee nasashada iyo bogsashada iyagoo heysta ujeedooyin waaweyn oo lagu gaarayo.
Haddii aad caadi ahaan dareentid in aad waqti iska sugeyso jirkaaga si aad u bogsato si aad mar labaad ugu dhufatid jimicsiga, waxaad la yaabi doontaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad u soo kabsan kartid markaad ku darsatid Anadrol qaabka tababarkaaga. Anadrol waxay leedahay awood aad u fiican oo lagu xoojinayo isdhexgalkaaga iyo murqahaaga, sidaas darteed waxay kaa caawineysaa inaad bogsato oo aad bogsiiso.
(7) Waxay ka caawisaa ka hortagga dhaawacyada xubnaha
Waxay bixisaa heer difaac ah dadka isticmaala qaabka miyir-beeleedka ee laabatooyinka si loo fududeeyo kororka kordhinta. Tani waxay keenaysaa steroid anabolic androgenic steroid ah oo ku habboon steroid maadama ay ka ilaaliso muruqyadaada waxayna ka hortagtaa unugyada kaadida iyo shucaacadaada ka soo jeexan inta lagu jiro culeyska culus. Marka, Anadrol kaliya ma yarayso halista dhaawaca marka qaadista miisaan culus, laakiin sidoo kale waxay yareysaa xanuunka wadajirka ah ee inta badan la dareemo inta lagu jiro jimicsiyada adag.
(8) Waxay xakameysaa heerka SHBG
Testosterone waa mid ka mid ah dhismayaasha muhiimka ah ee gacan ka geysta jirka iyo xoogga weyn. Sida magaca magaciisa la sheego, hormoonka galmada ee globulin waa globulin oo jecel inuu isku xidho testosterone. Marka ay isku xirto testosterone, waxay ka hortagtaa hormoonada jinsiga in ay si wax ku ool ah u shaqeyso. Qaadashada Anadrol waxay faa'iido u leedahay dareenka ah in uu yaraynayo dhaqdhaqaaqa SHBG ee jirka, sidaas darteed waxay awood u yeelataa testosterone si loo kordhiyo libido iyo kordhinta murqaha.
(9) Waa la xakameyn karaa
Anadrol waxaa lagu badbaadin karaa steroids kale. Dhismayaal badani waxay ku daraan steroid tan ugu yaryar boodhkooda sababtoo ah awooda ay u dardar galin karto natiijooyinka. Inkasta oo xayiraad isdabajoog ah ay nafteeda u keeni karto natiijooyinka boggling, Anadrol waxay qaadi kartaa wax xitaa kor u kaca. Naqshadeynta Anadol waxay si fiican u shaqeysaa isticmaalayaasha iyagoo helaya tamar iyo awood.
Anadrol oo la yiraahdo Winstrol stack waa mid ka mid ah doorashooyinka ugu doorbidaya maaddaama ay bixiso natiijooyin xoog leh oo wax ku ool ah oo leh awood xoog leh. Nooleeyaha oo leh tijaabo-yaqaanka "Enantthate Stack" ayaa loo tixgeliyaa xoojinta ugu xoogan ee kor u qaadeysa heerarka testosterone iyo sidoo kale ka hortageysa saameynta daaweynta niyadjabka iyo libido. Trenbolone iyo Anavar waa noocyada kale ee anabolic anebolic kaas oo lagu dari karo Anadrol.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in guusha udubdhexaadintu ay ku xiran tahay nooca dusheeda loo isticmaalo. Sidoo kale, darnaanta waxyeelada Oxymetolone waxay yareyn kartaa ama kordhin kartaa iyadoo ku xiran nooca stero-yada aad go'aansato inaad la jeexdo Noolol.
Soo iibso Oxymetholone (Anadrol) budada Buyaas.com
Root 4-Chlorodehydromethyltestosterone budada (2446-23-3)
Mashiinka Methandrostenolone (Dianabol) budada (72-63-9)
Raw Oxandrolone (Anavar) budada (53-39-4)
Budada methandriol dufanka (521-10-8)